चितवनको भूमिमा सिक्किमका स्रष्टाहरु | चितवन पोष्ट दैनिक
चितवनको भूमिमा सिक्किमका स्रष्टाहरु
२०७१ फाल्गुन ३०, शनिबार ०२:३५ गते
यसपालिको भैरहवा साहित्यिक यात्रा स्मरणीय रह्यो । नेपाली कला साहित्य डट कमकी अध्यक्ष वेगवान सर्जक मोमिला जोशीको विशेष निमन्त्रणामा बडे र छोटे अर्थात् दाजु एलबी क्षेत्री र यो आनन्दले सुनौलो अवसर पायो । त्योभन्दा अघि मेरो मानसपटलमा दाजु रणेन्द्र बराली र दाजु इन्द्र रेग्मीले सिक्किमबाट केही साहित्यिक बन्धुहरु आउने र सौराहामै व्यवस्थापन गर्नका लागि मसित थोरै सरसल्लाह गर्नुभएको
थियो । यता मित्र कृष्ण प्रसाईं र एलबी दाजुको आफ्नै योजना । म थोरै अलमलिएँ पनि । देवकोटा लुसुन प्रज्ञाप्रतिष्ठानको निमन्त्रणामा सिक्किमबाट नेपाल आउने टोलीलाई चितवनमा सभ्य र भव्य स्वागतका लागि हामी तयार भयौँ । यहाँनेर मित्र ओम रोदनलाई सम्झिन
चाहन्छु । ओमजीको विशेष पहलमा कृष्ण प्रसाईंजी र मेरो चिनाजानी भयो । छोटो अवधिमै हामी सारै नजिक भयौँ । कृष्णजीको उदार हृदय र साहित्यिक समर्पण देख्दा मन सारै प्रफुल्ल भयो । भैरहवाको होटलमा दुई रात सँगै बस्दा कृष्णजी, दाजु एलबी र यो छोटेका बीचमा गम्भीर वार्ता भयो । अब चितवनको साहित्यको इतिहास लेखिँदा धेरै–धेरै साहित्यिक संघसंस्थालाई उल्लेख गरिने छ, पक्कै गरिने छ । हामी साहित्यिक संघीयतामा नगए पनि आ–आफ्नो रूचिअनुसारको संस्थामा आबद्ध छौँ । झन्डै ५० को हाराहारीमा जन्मेका छन्, साहित्यिक मन्दिरहरु । कविडाँडा साहित्य समाज अब बेग्लै परिचय भएको
छ । चरैवेति साहित्यिक पत्रिकाले आफ्नो सुगन्ध छोडेकै छ । विशिष्ट स्वभावका धनी मेरो बडे एलबी क्षेत्रीज्यूको न्यानो काखमा चरैवेति जवान हुँदैछ । टाढा रहेर पनि नजिक छु । साहित्यप्रतिको विशेष लगाव र स्वयम् पनि एउटा परिचय बनाइसकेको सर्जक एलबी क्षेत्रीले नेपालमा मात्र होइन, लन्डन र अस्टे«लियामा पनि आफ्नै साहित्यिक परिचय दिनुभएको छ । आफूलाई त्यति मह¤व दिने बानी छैन दाजुमा, तर मञ्चमा दाजु बोल्न थालेपछि स्रोताहरु कति ध्यानमग्न भएर सुन्छन्, त्यो हामी सबैलाई थाहा
छ । जरा हट्के उहाँको स्वभाव र शैली हो । साहित्यकार, साहित्यप्रेमी र साहित्यसेवी यी तीनवटै गुण एउटै मान्छेमा पाउन गाह्रो हुन्छ । एलबी क्षेत्री थ्री इन वन । जगजाहेर छ, प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम् ।
२०७१ साल फागुन २३ गते शनिबारका दिन हामीले सिक्किमबाट आउनुभएका हाम्रै आफन्तहरुलाई हामै्र पवित्र माटोमा स्वागत गर्न
पायौँ । जुन भूगोलमा रहे पनि हाम्रो मूल जरो एउटै हो । यो मन नेपाली नै हो । सिक्किम, टिस्टा, दार्जिलिङ र उता देहरादून जहाँ गए पनि हाम्रो ढाका टोपीले, हाम्रो भानुभक्त र रामायणले, हाम्रो महाकवि र मुनामदनले सम्मान पाएकै छ । अझ यतिखेर म डा. राजेन्द्र भण्डारी दाजुलाई सम्झिरहेको छु । एकपटक पुगेको हुँ, म पनि सिक्किम । मलाई आफ्नै आँगनमा भएझैँ लाग्यो । साथीहरु, राजनीतिक हिसाबले अझै पनि हामी अन्योलग्रस्त अवस्थामा छौँ, तर साहित्यका हिसाबले हामी स्पष्ट छौँ, एक छौँ, एक रहने छौँ । अघिल्लो शनिबारको हाम्रा स्नेह मिलनले अहिले पनि यही सन्देश दिइरहेछ । राजनीतिले लगाएको घाउमा साहित्यले मलम लगाउनुपर्दछ, लगाउँछ ।
उद्योग वाणिज्य संघको हल नारायणगढमा हामीले एउटा इतिहास लेख्यौँ । मान्छे आखिर रमाउने मान्छेसितै हो । हामी मान्छेसित मान्छेजस्तै भएर व्यवहार गर्न सकिन्छ । त्यही सिकिन्छ भनेर साहित्यिक सत्संगमा लागेका छौँ । हाम्रो ध्येय मानवता हो, भाइचारा हो, सत्यम् शिवम् सुन्दरम् हो । हामी विघटनमा होइन, भेलामा विश्वास राख्दछौँ । सन्देहमा होइन, विश्वासमा विश्वास गर्दछौँ । यही सन्देश दिएको छ, त्यो स्नेह मिलनको दिनले । समय यतिखेर अलि बेइमान छ । राम्रोलाई राम्रो भन्दा ठूलै जोखिम उठाउनु पर्दछ । अनेक विशेषणहरुको भारी बोकाउँछ, यो निर्दयी समय । तर मान्छे आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनुहुँदैन । अलिअलि विवाद, अलिअलि विमति सुपाच्य नै हुन्छ । आफू परियो उत्तरआधुनिक नीलकण्ठ । सिक्किमबाट पाल्नुभएका आदरणीय सर्जकहरु म हजुरहरुलाई यही लेखमार्फत यो पावन भूमिमा बसेर फेरि पनि स्मरण गरिरहेको छु । हाम्रो आतिथ्यमा कुनै कमी रहन गएको रहेछ भने हामीलाई अवश्य पनि क्षमा गर्नुहुने छ ।
आज फेरि सम्झना गर्दछु, त्यो साँझको । कविडाँडा एउटा साहित्यिक तीर्थस्थल । ह्वाइट कर्नर, कैलाशनगर । त्यो साँझको बसाइ विशेष रहेको कुरामा कुनै शंका
छैन । साहित्यलाई माया गरेर मात्र पुग्दैन, सेवा पनि गर्नुपर्दछ । मीना लामिछाने भाउजूको त्याग, एलबी दाजुको समर्पण स्तूत्य छ, अनुकरणीय छ । यसरी साहित्यको सेवा गर्ने परिवार, पात्र हामी चितवनमा कति छौँ ? यो विज्ञापन होइन, यो प्रशंसा–पुराण पनि होइन, यो हो धरातलीय यथार्थ । जीवा लामिछाने र पदमश्रीका बारेमा म बोल्दिनँ । गोर्खे साहिँला मामा र अञ्जली भाइका बारेमा पनि मौन बस्दछु । प्यारो पुत्र सुमन घिमिरेले पनि यथासम्भव साहित्यिक सेवा गरेकै छन् । सौराहा नाइट हामीले अनुभूत नगरेको होइन । एलबी निवासको कुरा अलि बेग्लै भएकै
हो । नेपालका थुप्रै विद्वान्हरुले यहाँ अक्सिजनको ओभर डोज लिएकै
हो । मैले केही बोल्नै पर्दैन । धेरैभन्दा धेरै सजिला, डेब्रा, राता, नीला, पहेँला सबै रंगले यो प्रेमको रहमा, यो स्नेहको दहमा नुहाएका छन्, कृतज्ञ भएर फर्केका छन् । अझ यो पवित्र तीर्थस्थलमा अमेरिका, ब्रिटेनबाट, फ्रान्सबाट पनि अतिथिहरु आएका छन् । बडे दिलवाले नाम पाउनुभएको छ, एलबी दाजुले । गिरीजी एक रात हामी पनि कविडाँडामा भन्ने आदरणीय सर्जकहरु धेरै हुनुहुन्छ । यसपालि भैरहवामा यस्तै स्वर सुनियो । राम र लखन बन्यो बडे र छोटेको
जोडी । अब प्रलय आए पनि यो लय बिग्रन्न । हामी रदिफ र काफिया भयौँ । हाम्रो आत्मीयता जगजाहेर छ । अझै गाढा र अझै प्रगाढ, हाम्रा सन्तानहरु पनि छक्क ! कतै छोरी पुनमले हाम्रै कथामा, हाम्रै दोस्तीमा आधारित सिनेमा पो बनाउने हुन् कि ! कुछ भी हो सकता है । लु, थोरै बहकिएँ म । सायद्, म पनि बहकिइनँ भने कुनै पनि साहित्यिक माहौल महकिने छैन ।
कृष्ण प्रसाईं बन्धु हजुरको न्यानो मायाले पनि मलाई भाग्यमानी बनाएको छ । हाम्रो सहयात्रा अनन्त कालसम्म रहिरहने छ । कात्रोमा गोजी हुन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । थाहा हुनु ठूलो कुरा होइन, व्यवहारमा उतार्नु ठूलो कुरा हो । ठूला–ठूला कुरा गर्नुभन्दा सानो काम गरेर उदाहरण बन्नु समाज र राष्ट्रका लागि मह¤वपूर्ण हुने रहेछ । जीवनले यो पनि सिकायो । हजारौँ चेलाचेलीहरुलाई अंग्रेजी साहित्य पढाएर आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल मेरा बडे अझै पनि कदम–कदममा हाम्रा लागि गुरू बन्नुभएको छ । उहाँ पनि सामान्य मान्छे नै
हो । उज्याला र अँध्यारा पक्षहरु सबैमा हुनुहुन्छ । पूर्ण ठीक र महान् कोही पनि हुँदैन । हामी मान्छे कमजोरीको पोको नै हो । तर, हामीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्दछ । समष्टिमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्दछ । पूर्वाग्रही बनेमा त्यस्तै–त्यस्तै हो । फूलको आँखामा त्यसैले लेखिएन । हाम्रो मन पवित्र भएमा हामीले अक्सर हरेक कुरामा पवित्रता देख्छौँ । होइन भने, हामी परपीडक बन्दाबन्दै स्वपीडक बन्न पुग्दछौँ । यदाकदा हाम्रो हृदयमा घृणारस उत्पन्न हुन गएमा त्यसले अरुलाई होइन, भतभती हामीलाई नै पोल्दछ । प्रेमरस उत्पन्न हुँदा कति आनन्द हुन्छ ! अघिल्लो शनिबारको पावन अवसरलाई सम्झेर म यतिखेर सम्पूर्ण साहित्यिक मित्रहरुलाई प्रेममय बन्न हार्दिक अपिल गर्दछु । यही प्रेम–सन्देश सिक्किमसम्म पटकपटक पुगोस् भन्ने कामनासमेत गर्दछु ।
चितवन अनन्त सम्भावना भएको जिल्ला हो । सम्भावनालाई मूर्तरुप दिन मानवीय प्रयत्न चाहिन्छ । एक्लै केही गर्न त्यति सरल हुन्न । एकतामा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा कमिला र मौरीले प्रमाणित गरिसकेका छन् । हामी एक भएर अघि बढेमा दुई–दुईपटक मदन पुरस्कार भित्राएको जिल्लाले अझै चमत्कार गर्ने सम्भावना छ । सकिन्छ केही गरौँ र सकिँदैन, गर्नेलाई अनि सामथ्र्य हुनेलाई अझै उत्साहित बनाऊँ । मीठो बोलेर राम्रोलाई राम्रो भन्दा हाम्रो सत्ता हल्लिँदैन । ती समस्त सिक्किमे मित्रहरुलाई साक्षी राखेर कसम खाऊँ, हामी एक हौँ । अनेक भएर पनि एक हुन सकिन्छ ।